म संस्थालाई (NRNA) धेरै माया गर्ने मान्छे हुँ तर छाती चिरेर देखाउन सक्दिन: पत्रकार सच्चि मैनाली | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
म संस्थालाई (NRNA) धेरै माया गर्ने मान्छे हुँ तर छाती चिरेर देखाउन सक्दिन: पत्रकार सच्चि मैनाली
( Words) 14 seconds
जवाफ दिनुपर्ने अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक मलाई फेसबुकमा जुहारी खेल्न मन लाग्दैन । नत समयनै छ ।
म संस्थालाई (NRNA) धेरै माया गर्ने मान्छे हुँ तर छाती चिरेर देखाउन सक्दिन । जसले जुन चस्मा लगाएर हेर्नु हुन्छ उहॉले त्यस्तै देख्नुहुन्छ ।
जनसम्पर्क पक्षले जितुन वा प्रवासी पक्षले सबै मेरा आफ्नै हुन किनकि म राजनितीको “र” पनि नजानेको र नबुझेको मान्छे । दुवैलाई काट्दा रातै रगत आउँछ त्यति बुझेको छु ।
देश धुर्मुस सुन्तलीले बनाउन, रविले बनाउन, के पी वलीले बनाउन, देउवाले बनाउन , डा. केशव पौडेलले बनाउन , रविना थापाले बनाउन, मलाई FAKE ID बनाएर लखेट्न खोज्नेहरूले बनाउन वा जसले बनाउन । मलाई मेरो देश बने पुग्छ । यहॉ पनि कुरा त्यहि हो । एनआरएन जसले बनाए पनि हुन्छ तर बनाउन ।
कुरा सदस्यता लिनेको –
मैले कसैलाई सदस्यता नलिनुहोस् भनेको छैन । सच्चिनुपर्ने कुरा सच्चिएपछि म आफु सदस्य अवश्य बन्छु । तर यतिखेर म एउटा ब्यक्ति सदस्य नबनेर केहि फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पनि । एउटा सचेत नागरीकले त्यो पनि अमेरिका जस्तो प्रजातांत्रिक मुलुकमा बसेर त्यो पनि आफ्नै ब्यक्तिगत फेसबुक वालमा आफ्नो बिचार राख्दा FAKE ID बाट गाली गर्ने देख्दा दया लाग्छ । बैयक्तिक स्वतन्त्रता तपॉईहरूको छ मेरो छैन ? फेरी तपॉईंहरू त यो वा त्यो पक्षलाई हरॉउँ भनेर लाग्नु भएको छ । म संस्थालाई जितॉउ भनेर लागेको छु । मैले सदस्य बनेर सबै बन्छन् भने म अहिले बन्छु, मैले यतिखेर एनआरएनमा सुधार्नु पर्ने कुनै कुरै छैन । It’s perfect भनें भने के सबैले पत्यांउछन् ? तपॉईं पत्याउनु हुन्छ ? तपॉईंले भनेर सबैले पत्याउँछन् ? सत्य स्वीकारेर सुधारोन्मुख बाटोमा हिंडदै सबैलाई समेटे यो साझा संस्था बन्न सक्ला तर तपॉईंहरू मध्य बिभिन्न पक्षले constructive comments दिनेलाई घेराबन्दि गरेर लखेट्ने अनि केहिले FAKE ID बनाएर गाली गर्दै हिंड्ने र सबैलाई लखेट्दै हिंडने हो भने यो संस्था तपॉईंहरू आफैले पत्तै नपाई धराशायी बनाउनुहुन्छ । यो स्टाटसको screen shot लिएर राख्नुहोला ।
यो पनि पढ्नुहोस सरकार हुण्डाईको लक्ष्मीकाे दादागिरी कहिले सम्म ?
सदस्य नबन्नु भनेर बोल्नेको जिम्मेवारी कसले लिने ?
के “सच्चीको साथमा” कार्यक्रममा आएर बोलेका वक्ता सबै जनसम्पर्क वा सबै प्रवासि मन्चका हुन् ? मैले त सबै बर्गबाट समेट्ने कोशिस गरेको छु । कति आउनुभयो कति schedule conflict का कारण आउन सक्नु भएन फेरी उहॉहरूले बोलेको कुराको जिम्मेवारी मैले कसरी लिन सक्छु ? कसैसंग प्रश्न गर्दा उसले के उत्तर दिन्छ भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ ?
यो हामी सबैको साझा संस्था हो भनिन्छ । त्यस्तो सॉच्चै हो भने सबैको आवाज र चाहना सुनेर यसलाई सुधारू । सक्षम, नैतिकवान र दूरदर्शी नेतृत्वलाई सहयोग गरौं चाहे त्यो जो होस् । Give respect take respect अनि बन्छ होला हामी सबैको संस्था ।
तपॉईंको जति हो त्यतिनै यो मेरो पनि संस्था हो । सदस्य भन्ने कुरा आज नबने सच्चिनु पर्ने कुरा सच्चिएपछि भोली बनिन्छ । त्यो ठुलो कुरा भएन । तर,जबसम्म आम एनआरएन समेटिंदैनन् तबसम्म संस्थाको कुनै अर्थ नहोला । संस्था बनाउन तपॉईं लाग्नु भएको हो भने संस्थाको जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नो बिचार ब्यक्त गरेकै कारण सर्वसाधारणलाई थर्रकाउने पदाधिकारीलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउन लाग्नुहोस् । संस्थामा भएका बेथिति सुधार्न लाग्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यहॉ कसैले कसैलाई सदस्य बन्न बिन्तिभाउ गर्नुपर्दैन ।
जान चाहने तपॉईहरू भित्र जानुहोस् हामी बाहिरबाट साथ दिनेछौ ।
शासन बिधिको हुनुपर्छ ब्यक्तिको होईन ।
काम यस्तो गर्नुस कि सदस्य बन्न आम मानिस लाम लागेर आउन ।
जहॉसम्म रह्यो मेरो कुरा लखेट्नेहरूले जीवनभर लखेटुन । माया गर्नेले गरीरहुन , गाली गर्नेले गरीरहुन, म आफ्नो धर्ममा निरन्तर लागी रहनेछु । सुझाव , सल्लाह दिंदै गर्नुहोला । मान्छे हुँ गल्ती हुन सक्छ । गल्ती गरेको महशुष भए सच्च्याउँछु तर कसैले आफ्नो ब्यक्तिगत अभिष्ट पुर्ति नभएको कारण गाली गर्छन् वा लखेट्छन भने म हिंड्ने होईन निरन्तर दौडिरहन्छु । सुझाव , सल्लाह दिन भने नछोड्नुहोला । धन्यवाद् ।हामीले सच्चि मैनालीको फेसबुक वालबाट यो समाग्री लिएका हौं ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने आर्थिक भार गत एक दशकमा तीन गुणा
२६,माघ.२०७५,शनिबार १९:४९ मा प्रकाशित
← बालिका बलात्कारको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
आजको राशिफल →